Ny sasany Ilaina ny Soso-kevitra ny hanombohana ny resaka amin'ny ilay Tovovavy Saodiana - Fiainana ao Arabia Saodita
Ny sasany Ilaina ny Soso-kevitra ny hanombohana ny resaka amin’ny ilay Tovovavy Saodiana — Fiainana ao Arabia Saodita
Ao amin’ny lahatsoratra teo aloha, isika, efa nifanakalo hevitra momba maro ny toro-hevitra mahasoa ho an’ireo mpiasa mpila ravinahitra ny olona mba hanomboka ny resaka amin’ny Arabia. Eto isika dia miresaka momba ny fomba Ireo mpiasa vahiny afaka manana ny ranomandry torotoro sy hahazo ny chit chat nanomboka ilay tovovavy Saodiana. Na ny mpila ravinahitra dia fihaonana ilay tovovavy Saodiana ao anatiny na any ivelan’ny Arabia Saodita soso-kevitra ireo dia hita fa ilaina. Voalohany indrindra, izy io dia nahatakatra fa misy fanavahana amin’ny manana-dresaka amin’ny Saodiana lahy sy ny vavy. Raha ny resaka no miaraka amin’ny vehivavy Saodiana izany no zavatra fantany fa misy koa ny vehivavy manana-dresaka miaraka aminy. Raha ny mpila ravinahitra vehivavy mihaona ilay tovovavy Saodiana voalohany eo amin’ny fiainana, ny fivoriana mba ho amin’ny fiaraha-mientana, na amin’ny fiara fitateram-bahoaka, na dia mety hitranga na oviana na hafa-bahoaka toerana manaraka ireto foto-kevitra mety ho betsaka ilaina amin’ny famoronana ny rivotra niainana ny fananana namana resaka. Ireo lohahevitra ireo dia mety ho ilaina amin’ny fampifandraisana ny elanelana misy eo amin’ny roa olon-tsy fantatra. mandria am-piadanana ny Maha-reny zazavavy rehetra tia ny zanany ny tena, noho izany dia ekena mba mangataka ilay tovovavy Saodiana iray fangataham-panazavana momba ny ankizy. Raha ny ilay tovovavy Saodiana dia nanontany momba ny sokajin-taona ny zanany, dia tsy mampaninona izany, toy ny zavatra rehetra reny manerana ny glaoby, ny Saodiana neny manana fitiavana be ho an’ny zanany ary dia faly foana ny miresaka momba ny zanany. Izy mety tsy an-tsitrapo momba ny isan’ny zanany, ny taona, ary inona no tiany ho hanina sy ny fitafiana sy ny zavatra tsy sns.
Izany dia tsy nahatsiaro ny ratsy raha misy ilay tovovavy Saodiana dia nanontany momba ny fomba mihazakazaka ny an-trano ny tsara na ny fomba tsy izy ny fitantanana ny mpiasa an-trano, ny fanontaniana momba ny Saodiana fandrahoan-tsakafo, ny fomba fanamboarana hafa Arabia lovia. Izy dia aleo ho sambatra kokoa amin’ny adihevitra momba ireo olana ary mety hahatsapa tsara mba hanome soso-kevitra.
Mazava ho azy, ny fifanakalozan-kevitra momba ny lisitry ny akanjo sy firavaka sns
koa dia tena tsara ny lohahevitra. Mety ho tena sambatra ao mizara ny fahaizany manokana ao amin’ny lisitry, mifidy akanjo tsara tarehy, tsara tarehy ny teti-dratsy momba ny firavaka sy ny toerana tsara mba hiantsena eo. Ny Tandrefana ankizivavy dia afaka mora foana ny mpitsara raha ny ilay tovovavy Saodiana dia mafy ny voambolana sy ny fifampiresahana fahaiza-manao amin’ny teny malagasy. Izany dia mety ho soso-kevitra mba hidera azy raha toa izy ka efa tsara resaka ny fahaiza-manao amin’ny teny malagasy ary raha toa ka ny raharaha, raha tsy izany, dia tsy maintsy amporisihina amin’io mianatra io fiteny vaovao. Mety azo heverina fa ny vehivavy Saodiana izay no miteny anglisy misosa tsara dia mety ho mahazo aina miaraka mifanakalo hevitra fa hafa manan-danja. Ny ny fifanakalozan-kevitra dia mety miala amin’ny akanjo sy firavaka ny olana amin’izao fotoana izao, ny olana lehibe eto amin’ny firenena sy ny vahaolana isika. mandria am-piadanana Zava-dehibe ny mahafantatra fa ilay tovovavy Saodiana izay no fivoriana voalohany dia mety ho tsy mahazo aina amin’ny fanontaniana momba ny vadiny, toy ny inona ny anarany, ny taonany, ny asa sy ny fanontaniana momba ny fidiram-bola ny vadiny.
Ireo fanontaniana ireo dia tokony ho voafetra ny fiainana manokana ao amin’ny fiaraha-monina Saodiana
Raha miresaka amin’ny olon-kafa ilay tovovavy Saodiana ny lohahevitra toy ny ara-politika, ny raharaha ara-pivavahana sy ny fanambadiana dia tsara kokoa mba ho azo sorohina, ary mba tsy hiadian-kevitra. Mety mamorona sakana lehibe eo amin’ny fisakaizana ny ankizivavy roa fivoriana ho an’ny fotoana voalohany. Iray dia tsy ho gaga ianao raha toa ka misy ilay tovovavy Saodiana dia mangataka misy fanontaniana manokana mikasika ny fianakaviany ny raharaha sy ny karama. Mety hanontany ny westerner fa izay ny vadiny ary inona no nataony, ary izy dia mety ho fanontaniana momba ny fandaniana ao an-tokantrano ihany koa. Iray dia tsy miresaka na inona na inona fihetseham-po ny endriky ny momba ilay lehilahy Saodiana na hafa mialoha ny raharaha ara-panambadiana izy satria ho very ny fifanajana eo anoloan’ny Arabia saodita ny vehivavy
← Toro-hevitra ho an'ny Mampiaraka ny Vehivavy Arabo Mampiaraka Soso-kevitra